UHLAZIYO-MNQOPHISO 22 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UHLAZIYO-MNQOPHISO 22UHLAZIYO-M ... 22
221“Ukuba ubhaqa inkomo okanye igusha yomwenu ilahleka, sukuyijonga nje, koko yinqande uyigoduse. 2Kodwa ke ukuba umniniyo uhlala kude okanye akuyazi ukuba yekabani na, yithathe uyigcine kwakho. Akufika ke umniniyo eyifuna mnike. 3Yenza kwaloo nto nokuba yidonki okanye yimpahla yokunxiba oyicholeyo, nayo nantoni na yomwenu elahlekileyo.Mfud 23:4
4“Ukuba idonki okanye inkomo yomwenu ibuthisile, sukugqitha nje; mncedise niyiphakamise.Mfud 23:5
5“Abafazi mabanganxibi iimpahla zamadoda, ngokunjalo namadoda makangazinxibi iimpahla zabafazi, kuba abantu abenza imikhuba elolo hlobo banezothe kuNdikhoyo uThixo wakho.
6“Ukuba ubonisele intaka emthini okanye phantsi, waza wafumanisa ukuba imazi leyo iyafukama okanye inamathole, sukuyibamba uyithathe imazi leyo. 7Amathole wona ungawathatha, kodwa ke yena unina myeke, khon' ukuze uxhamle ubomi obude obunenkqubela.
8“Xa usakha indlu yenzele ungqameko apha emaphethelweni ephahla, khon' ukuze ungabi natyala lakubulala xa umntu ewe khona waza wafa.
9“Entsimini olime kuyo idiliya sukulima nesinye isityalo, hleze ungafumani sivuno kuzo zombini. 10Ungaze ubophe inkomo kunye nedonki xa ulimayo. 11Ungaze unxibe impahla engumxube, uboya kunye nomchako.Nqulo 19:19
12“Impahla yakho yenzele amanquma kumasondo omane.”Ntlango 15:37-41
13“Kungenzeka ukuba indoda izeke, ize kamva idikwe ngumfazi lowo, 14imnyelise ngokuthi: ‘Ndamzeka, ndaza ndathi ndakusondela kuye ndabhaqa into yokuba akayontombi.’
15“Kumbandela onje ke abazali bomfazi baya kuthatha ubungqina bobuntombi, baye nabo enkundleni kumadoda amakhulu edolophu leyo. 16Wothetha enjenje ke uyise: ‘Lo mfo wathatha le ntombi yam ukuba ibe ngumkakhe; kodwa ngoku udikiwe yiyo. 17Uyayityhola ngokuthi: “Kuthe kanti ibingeyontombi.” Kambe ke, nabu ubungqina obudiza ubuntombi bomntwan' am; khangelani, niyayibona le ngubo; injani?’ 18Kwesi sithuba ke amadoda amakhulu edolophu leyo aya kuyithatha indoda leyo ayikatse. 19Kwangokunjalo indoda leyo iya kuhlawuliswa ikhulu leesiliva, lize linikwe uyise wentombi leyo, kuba le ndoda ihlaze intombi yamaSirayeli. Ngaphezu koko ke, lo mfazi uya kuhlala engumkayo; soze abe nelungelo lokumala nanini na.
20“Ukuba kuthe kanti akukho bungqina babuntombi kuye, 21amadoda amakhulu edolophu leyo aya kumkhupha kowabo, amxulube ngamatye ade afe. Kaloku wenze ihlazo phakathi kwamawabo, wavula ubuhlanti bukayise engendanga. Ngale ndlela ke noba nibuncothule ububi kwaSirayeli.”
22“Xa umfo othile ebhaqwe ekrexeza nomka-mntu, mababulawe bobabini. Ngaloo ndlela ke noba nibuncothule ububi kwaSirayeli.
23“Xa intombi eyendayo ibhaqwe emzini ihlangene nandoda yimbi, 24bobabini mabathathwe bakhutshelwe ngaphandle kwedolophu, baxulutywe ngamatye bade bafe. Intombi le mayibulawe kuba ingenzanga mizamo ikhale, nangona ibingéviwayo. Ke yona indoda le mayibulawe kuba ithathe isondo kwintombi eyendayo. Ngale ndlela ke noba nibuncothule ububi phakathi kwenu.
25“Ukuba indoda idlwengule intombi eyendayo besendle, indoda leyo mayibulawe. 26Ke yona intombi leyo mayingenziwa nto, kuba ayenzanga sono sifanele ukuba ife. Kaloku eli tyala lifana nelendoda ehlasele enye yayenzakalisa, 27kuba le ndoda idlwengule intombi endle, yaza yathi nangona ikhala akwabikho bani ungayincedayo.
28“Ukuba indoda ibhaqwe idlwengula intombi engendiyo, 29loo ndoda mayikhuphe ikhazi eliziisiliva ezimashumi mahlanu, iyithathe loo ntombi ibe ngumkayo. Kaloku izithathele isondo ngenkani; ngoko ke mayingaze yahlukane nayo nanini na.Mfud 22:16-17
30“Makungaze kubekho nyana uzeka umka-yise; ngokwenjenjalo uya kuba uhlazisa uyise.Nqulo 18:8; 20:11; Hlaz 27:20”